रेणुले मतान्तर ह्वात्तै घटाईन्, देवी ज्ञवाली १७० मतले मात्र अगाडी ! एमालेजन तनावमा !
ARCHIVE, POLITICS » रेणुले मतान्तर ह्वात्तै घटाईन्, देवी ज्ञवाली १७० मतले मात्र अगाडी ! एमालेजन तनावमा !
भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेलाई खतरा बढेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार देवी ज्ञवाली १७० मतले मात्र अगाडी छन् । पुनः निर्वाचन भएको भरतपुर १९ मा एमालेले अपेक्षित मत पाउन नसकेपछि एमालेको विजय यात्रामा धक्का लाग्ने खतरा बढेको छ ।